देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ७५ पुग्यो
प्रकाशित मिती :May 4, 2020
विदेशमा ७३ नेपालीको मृत्यु, पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित
नेपालगन्जमा एकैदिन देखियो १५ जनामा संक्रमण
काठमाडाैं – नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७५ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले आइतबार एकैदिन नेपालगन्जमा १५ र वीरगन्जमा एक नयाँ संक्रमित देखिएको बताए ।
शुक्रबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– ६ का ६० वर्षीय व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि शनिबार उनको परिवारका सदस्य, छिमेकी, उनी काम गर्ने मस्जिद र मदरसा, ट्युसन पढाएका बालबालिकासहित उनी र उनको परिवारका सदस्यसँग सम्पर्क भएका ९० जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो । रिपोर्ट आएका ६० जनामध्ये १५ मा संक्रमण रहेको पुष्टि भएको हो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना रोग फोकल पर्सन नरेशबाबु श्रेष्ठले स्वाब संकलन गरिएका ३० जनाको रिपोर्ट आउन अझै बाँकी रहेको बताए । ‘आइतबार सार्वजनिक रिपोर्टले संक्रमितको संख्या अझ बढ्ने संकेत गरेको छ, किनभने डेन्जर जोनका व्यक्तिको रिपोर्ट आउनै बाँकी छ,’ उनले भने ।
संक्रमण देखिएकामध्ये आठ पुरुष र सात महिला छन् । जसमा सात वर्षकी बालिकादेखि ६२ वर्षका वृद्धसम्म रहेको श्रेष्ठले बताए । भेरी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाका अनुसार संकलित स्वाब दैनिक ३०–३० का दरले परीक्षण भइरहेको छ । एकपटक पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि तीनपटकसम्म परीक्षण भइरहेको उनले बताए । ‘एकपटक पोजेटिभ आउँदैमा कोरोना संक्रमण भएको हो भन्न नसकिने भएकाले कम्तीमा तीनपटकसम्म परीक्षण गरेपछि मात्र प्रमाणित गरिन्छ,’ उनले भने ।
देशभर संक्रमण देखिएका ७५ जनामध्ये १६ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । ५९ संक्रमित विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कोसी अस्पताल विराटनगरमा ३१, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेमा १६, नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा नौ तथा भरतपुर अस्पताल चितवन, बुटवल कोरोना अस्पताल र सेती अस्पताल धनगढीमा एक–एकजनाको उपचार भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म ६३ हजार एक सय दुईजनाको नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ हजार चार सय १४ जनाको पिसिआर र ४९ हजार ६ सय ८८ जनाको आरडिटी विधिबाट परीक्षण भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाका अनुसार प्रदेश १ मा पाँच हजार चार सय ९९, प्रदेश २ मा पाँच हजार सात सय नौ, बागमतीमा आठ हजार पाँच सय १५, गण्डकीमा पाँच हजार आठ सय ३४, प्रदेश ५ मा चार हजार चार सय ९२, कर्णालीमा पाँच हजार पाँच सय ६७ र सुदूरपश्चिममा १५ हजार ७२ नमुना आरडिटी विधिबाट परीक्षण भएको छ ।
विदेशमा ७३ नेपालीको कोरोनाबाट मृत्यु, पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित
कोरोना संक्रमणबाट शनिबारसम्म ७३ जना गैरआवासीय नेपालीको मृत्यु भएको छ भने पाँच हजारभन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को स्वास्थ्य समितिको तथ्यांकअनुसार बेलायतमा मात्रै ४९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बेलायतको ग्रेटर लन्डनमा २७, मिडल्यान्डमा आठ, साउथ–­इस्टमा ११, साउथ–वेस्टमा तीन गरी ४९ जनाको मृत्यु भएको एनआरएनएले जनाएको छ । अमेरिकाको मध्यन्युयोर्कमा १२, कोलोराडोमा दुई र भर्जिनियामा एक गरी १५ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा पाँच र आयरल्यान्ड, जापान, टर्की र नेदरल्यान्डमा एक–एकजनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाले बताए ।
सापकोटाका अनुसार विश्वभर पाँच हजार दुई सय ४७ गैरआवासीय नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । उनीहरूमध्ये एक हजार पाँच सय ७० जना निको भइसकेका छन् । कतारसहित मध्यपूर्वका केही देशले दुई हजार तीन सय नेपाली श्रमिकमा संक्रमण देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् ।
एनआरएनएले कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित भएकाहरूको सहयोगार्थ ४५ देशका राष्ट्रिय समितिमा राहत वितरणको काम गरिरहेको छ । कोरोना प्रभावित विभिन्न देशका ३५ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई राहत वितरण गरिएको महासचिव डा. हेमराज शर्माले बताए ।
किन अघि बढ्न सकेन् बूढीगण्डकी ? उपभोक्तासँग उठाईएको ३२ अर्ब २२ करोड उपयोगविहीन !
आज विजया दशमी, टीकाको उत्तम साइत बिहान १० : ३५ बजे
रसुवाबाहेक ७६ जिल्लामा फैलियो कोरोना, ओखलढुंगामा पनि देखियो सङ्क्रमण
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भएकी बालिकामा कोरोना पोजिटिभ
चन्द्रमामा पनि मानव निर्मित प्रदूषण
अधिकृतको कमाइ साढे १० करोड !